Recycle ပလပျစတဈတှနေဲ့ ကြူရှငျလခပေးလို့ရတဲ့ အိန်ဒိယနိုငျငံက ကြောငျး - Lifestyle Myanmar
ဘယ်လောက်ဆင်းရဲတဲ့မိဘဖြစ်ပါစေ ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကိုတော့ ကျောင်းကောင်းကောင်းမှာ ထားနိုင်ဖို့အတွက် အိပ်မက်တွေ ရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စားဝတ်နေရေးအတွက်တောင် မနည်းရုန်းကန်နေရတဲ့ အခြေအနေမှာ ကလေးတွေရဲ့ ကျောင်းစားရိတ်ဆိုတာဟာ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကြီးတစ်ခုကဲ့သို့ ခက်ခဲနေကြရပါတယ်။ ဒီလိုဆင်းရဲချို့တဲ့တဲ့ မိဘတွေရဲ့ကလေးတွေရဲ့ ပညာရေးအတွက် ပရဟိတကျောင်းတွေ အမြောက်အများ ပေါ်ပေါက်နေတဲ့ အထဲကမှ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ သေးငယ်တဲ့ကျောင်းကလေးကတော့ ထူးထူးခြားခြား ပလပ်စတစ်တွေကို ကျောင်းလခအဖြစ် သွင်းခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။
Akshar ဖိုရမ်ဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ Guwahati ရဲ့ ရွာလေးတစ်ရွာဖြစ်တဲ့ Pamohi မှာတည်ရှိနေပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ ၆လလောက်ကတည်းက စတင်ခဲ့တဲ့ Recycling အစီအစဉ်ကို မကြာမီကပဲ အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါကျောင်းကို Parmita Sharma နဲ့ Mazin Mukhatar တို့နှစ်ယောက်က ပူးတွဲတည်ထောင်ခဲ့ပြီး လူတိုင်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာနဲ့ ဝင်ငွေရရှိဖို့အတွက် ရည်ရွယ်ခဲ့ကြပါတယ်။
Akshar accepts plastic packets as school fees. The plastic is recycled for construction. What if every school does something like this? #recycle #environment #sustainability #aksharforum #sdg11 #globalgoals #aksharfoundation
A post shared by Akshar Foundation (@akshar_foundation) on Apr 20, 2019 at 5:07am PDT
အဆိုပါကျောင်းမှာ ကျောင်းစာအပြင် ကလေးတွေရဲ့ ကိုယ်ပိုင်တီထွင်ဖန်တီးမှုနဲ့ စူးစမ်းမှု လက်မှုပညာ အစရှိတဲ့အရာတွေကို သင်ကြားပေးလျှက်ရှိပြီး သင်ရိုးညွှန်းတမ်းကိုလည်း ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိပဲ ကလေးတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကျွမ်းကျင်မှုတွေ အရည်အချင်းတွေကို ဖော်ထုတ်ပေးလျက် ရှိပါတယ်။
Akshar Forum isamodel for low-cost, high quality education reform. #aksharforum #qualityeducation #SDGs #SDG4 #globalgoals #foreverychild
A post shared by Akshar Foundation (@akshar_foundation) on Apr 19, 2019 at 3:44am PDT
ကျောင်းအုပ်ကြီးရဲ့ ပြောပြချက်အရ လွန်ခဲ့တဲ့ ၆လလောက်ကတည်းက ကျောင်းသားတွေစုပေါင်းပြီး အနီးတဝိုက်အိမ်ထောင်စုတွေကနေ ပလစ်စတစ်တွေကို စုဆောင်းမှု စတင်ခဲ့သလို အမှိုက်စိုနဲ့ အမှိုက်ခြောက် ခွဲခြားပစ်နိုင်အောင် ပညာပေးခဲ့ကြပါတယ်။
Original excavator design by Raja. Before this year he'd never been toaschool. After completing any design project, students yell out "I am an engineer!" #AksharForum #education #school #excavator #children #guwahati #india #everydayschool #happy #cool #cute #play #game #instagood Photo by @parmitasarma
A post shared by Everyday School (@everyday.school) on Dec 4, 2015 at 1:09am PST
ဒါ့အပြင် ကျောင်းလခကိုလည်း စွန့်ပစ်ပလပ်စတစ်တွေနဲ့ ပေးသွင်းနိုင်ဖို့ စိတ်ကူးကိုအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။ စွန့်ပစ်ပလပ်စတစ်တွေကို အသုံးပြုပြီး တီတွင်ဖန်တီးမှုတွေ၊ ပြန်လည်အသုံးချမှုနဲ့ စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုတွေကို သင်ကြားပေးလျှက်ရှိပြီး ယခုလိုဆောင်ရွက်မှုဟာ ရွာလေးရဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိန်းသိမ်းရာရောက်သလိုပဲ ချို့တဲ့တဲ့ကလေးတွေအတွက်လည်း ပညာရေးကိုအားပေးရာရောက်ကြောင်း ကျောင်းအုပ်ကြီးကဆိုပါတယ်။
ဘယျလောကျဆငျးရဲတဲ့မိဘဖွဈပါစေ ကိုယျ့ရဲ့သားသမီးကိုတော့ ကြောငျးကောငျးကောငျးမှာ ထားနိုငျဖို့အတှကျ အိပျမကျတှေ ရှိကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ စားဝတျနရေေးအတှကျတောငျ မနညျးရုနျးကနျနရေတဲ့ အခွအေနမှော ကလေးတှရေဲ့ ကြောငျးစားရိတျဆိုတာဟာ ဝနျထုပျဝနျပိုးကွီးတဈခုကဲ့သို့ ခကျခဲနကွေရပါတယျ။ ဒီလိုဆငျးရဲခြို့တဲ့တဲ့ မိဘတှရေဲ့ကလေးတှရေဲ့ ပညာရေးအတှကျ ပရဟိတကြောငျးတှေ အမွောကျအမြား ပျေါပေါကျနတေဲ့ အထဲကမှ အိန်ဒိယနိုငျငံမှာရှိတဲ့ သေးငယျတဲ့ကြောငျးကလေးကတော့ ထူးထူးခွားခွား ပလပျစတဈတှကေို ကြောငျးလခအဖွဈ သှငျးခှငျ့ပွုခဲ့ပါတယျ။
Akshar ဖိုရမျဟာ အိန်ဒိယနိုငျငံ Guwahati ရဲ့ ရှာလေးတဈရှာဖွဈတဲ့ Pamohi မှာတညျရှိနပွေီး လှနျခဲ့တဲ့ ၆လလောကျကတညျးက စတငျခဲ့တဲ့ Recycling အစီအစဉျကို မကွာမီကပဲ အကောငျအထညျဖျောခဲ့ပါတယျ။ အဆိုပါကြောငျးကို Parmita Sharma နဲ့ Mazin Mukhatar တို့နှဈယောကျက ပူးတှဲတညျထောငျခဲ့ပွီး လူတိုငျးအသကျမှေးဝမျးကြောငျးပညာနဲ့ ဝငျငှရေရှိဖို့အတှကျ ရညျရှယျခဲ့ကွပါတယျ။ အဆိုပါကြောငျးမှာ ကြောငျးစာအပွငျ ကလေးတှရေဲ့ ကိုယျပိုငျတီထှငျဖနျတီးမှုနဲ့ စူးစမျးမှု လကျမှုပညာ အစရှိတဲ့အရာတှကေို သငျကွားပေးလြှကျရှိပွီး သငျရိုးညှနျးတမျးကိုလညျး ကနျ့သတျထားခွငျးမရှိပဲ ကလေးတှရေဲ့ကိုယျပိုငျကြှမျးကငျြမှုတှေ အရညျအခငျြးတှကေို ဖျောထုတျပေးလကျြ ရှိပါတယျ။
ကြောငျးအုပျကွီးရဲ့ ပွောပွခကျြအရ လှနျခဲ့တဲ့ ၆လလောကျကတညျးက ကြောငျးသားတှစေုပေါငျးပွီး အနီးတဝိုကျအိမျထောငျစုတှကေနေ ပလဈစတဈတှကေို စုဆောငျးမှု စတငျခဲ့သလို အမှိုကျစိုနဲ့ အမှိုကျခွောကျ ခှဲခွားပဈနိုငျအောငျ ပညာပေးခဲ့ကွပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ကြောငျးလခကိုလညျး စှနျ့ပဈပလပျစတဈတှနေဲ့ ပေးသှငျးနိုငျဖို့ စိတျကူးကိုအကောငျအထညျဖျောခဲ့ပါတယျ။ စှနျ့ပဈပလပျစတဈတှကေို အသုံးပွုပွီး တီတှငျဖနျတီးမှုတှေ၊ ပွနျလညျအသုံးခမြှုနဲ့ စှမျးအငျထုတျလုပျမှုတှကေို သငျကွားပေးလြှကျရှိပွီး ယခုလိုဆောငျရှကျမှုဟာ ရှာလေးရဲ့သဘာဝပတျဝနျးကငျြကို ထိနျးသိမျးရာရောကျသလိုပဲ ခြို့တဲ့တဲ့ကလေးတှအေတှကျလညျး ပညာရေးကိုအားပေးရာရောကျကွောငျး ကြောငျးအုပျကွီးကဆိုပါတယျ။